St. Kitts & Nevis waxay soo afjartay xayiraadihii safarka hawada ee Hindiya iyo Koonfur Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » St. Kitts & Nevis waxay soo afjartay xayiraadihii safarka hawada ee Hindiya iyo Koonfur Afrika
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
St. Kitts & Nevis waxay soo afjartay xayiraadii safarka hawada ee Hindiya iyo Koonfur Afrika.
Sida lagu dhawaaqay May 29, 2021 kaliya socdaalayaal si buuxda loo tallaalay ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan Federaalka.
St. Kitts & Nevis waxay soo dhoweynaysaa socdaalayaasha hawada caalamiga ah ee si buuxda loo tallaalay oo ka yimid Hindiya iyo Koonfur Afrika.
Ka qaadista xayiraadaha safarka ee waqtigan Hindiya iyo Koonfur Afrika waxay la jaanqaadaysaa qaadista xayiraadaha saaran dadka ka safraya UK 1 -da Sebtember, 2021.
Xayiraadda socdaalka ee St. Kitts & Nevis ayaa weli u taal safrayaasha caalamiga ah ee ka socda Brazil.
St. Kitts & Nevis waxay soo dhoweynaysaa socdaalayaasha hawada caalamiga ah ee si buuxda looga tallaalay Hindiya iyo Koonfur Afrika Oktoobar 18, 2021, oo laga qaaday xayiraadda dadka safarka ah labadan meelood. Ka qaadista xayiraadaha safarka ee waqtigan Hindiya iyo Koonfur Afrika waxay la jaanqaadaysaa qaadista xayiraadaha saaran dadka safarka ah ee ka imanaya UK 1 -da Sebtember, 2021, waxayna la jaanqaadeysaa heerka sare ee tallaalka ee Federaalka. Xayiraadda safarka ayaa weli u taal safrayaasha caalamiga ah ee ka socda Brazil.
Ka mid ah dadka waaweyn ee St. Kitts & Nevis, 77.4% ayaa qaatay hal qiyaas tallaalka AstraZeneca/Oxford, iyadoo 70.3% dadka waaweyn si buuxda loo tallaalay; carruurta iyo dhallinta da'doodu u dhaxayso 12 - 17, 10.9% ka mid ah ayaa qaatay qaddarkoodii ugu horreeyay ee tallaalka Pfizer/BioNTech iyadoo 6.8% ay heleen laba qiyaasood. (Tirakoobka ilaa Oktoobar 19, 2021).
Laga bilaabo Oktoobar 7, 2021, “Fasaxa Meesha” ayaa lagu soo koobay 24 saacadood, iyadoo imtixaanka imaanshaha RT PCR ee loo baahnaa lagu qaaday isla hoteellada iyo hoyga “Safarka La Oggolaaday”. Natiijooyinka imtixaanka ayaa la heli doonaa inta lagu guda jiro 24-ka saac "Fasaxa Meesha." Socotadaas leh natiijada imtixaanka taban waxay si buuxda ugu biiri karaan Xiriirka kadib markii 24-saac ay dhammaato oo ay ku raaxaysato waayo-aragnimada tirada badan St. Kitts & Nevis dalabyada ay ka mid yihiin, maqaayadaha wax lagu cuno, la kulma xamaasadda mid ka mid ah baararka xeebta maxalliga ah ee “The Strip,” oo soo booqda jiidashadayada gaarka ah ee gaarka ah, u dhoofinta biyaha cad, socodka foolkaanada, dukaamaysiga suuqyada farshaxanka maxalliga ah ama kaliya qabowga mid ka mid ah xeebahayaga.
Ka -dhaafitaannada waxaa loo diyaariyay Muwaadiniinta iyo Dadka deggan Xiriirka St. Kitts iyo Nevis iyo carruurta ka yar 18 jir oo la socda waalidkood ama mas'uuliyiintooda si buuxda loo tallaalay.
Dhammaan Borotokoollada iyo Shuruudaha Safarka ee u harsan Xiriirka St. Kitts & Nevis, oo ay ku jirto soo gudbinta natiijooyinka imtixaanka taban ee imtixaanka RT PCR 72 saacadood kahor imaanshaha.
Qofka socotada ah waxaa loo tixgeliyaa inuu si buuxda u tallaalay markii laba toddobaad ay ka soo wareegtay markii la siiyay qaddarkooda labaad ee taxane tallaal oo laba qiyaasood ah (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm ama Sinovac), ama laba toddobaad kadib markay heleen hal tallaal oo keliya ( Johnson & Johnson). Isku -darka tallaalada la oggolaaday ee St. Kitts iyo Nevis waa la aqbalaa.